अध्यारोमा यसकारण चम्किँन्छ बिरालोको आँखा - Everest Dainik - News from Nepal
अध्यारोमा यसकारण चम्किँन्छ बिरालोको आँखा
काठमाडौंः के तपाईले राति बिरालोलाई हेर्नुभएको छ? अध्याँरोमा बिरालोको शरीर त देखिन्न । तर उसको आँखा चम्किएको भने प्रष्ट देखिन्छ । बिरालो झैं केही अन्य जनावर चितुवा, बाघको आँखा समेत अध्यारोमा चम्किन्छ । कारण के हो त?
आँखा चम्किँने जनावरको आँखाको माथिल्लो सतहमा स्फटिक तह ‘क्रिष्टल लेयर’ हुन्छ । उक्त तहले आँखामा पर्ने प्रकाशको किरणलाई परावर्तित गर्छन् । ऐनामा सूर्यको प्रकाश पर्दा परावर्तन भए झैं बिरालोको आँखामा प्रकाश पर्दा त्यसरी नै परावर्तन हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस आफ्नो बिरामी बच्चालाई बङगारामा राखेर बिरालो अस्पताल पुग्यो, डाक्टर स्तब्ध